ဥရောပသန်းပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ကြောင်းယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ပေါများ ခရီးသွားဧည့်. တစ်ဦးရှိပါတယ် မြင်ကွင်းများ၏အမျိုးမျိုး ကြည့်ရှုရန် - ဗိသုကာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များမှအဟောင်းတိုက်ကြီး၏သဘာဝအံ့ဖွယ်အမှုများအထိ.
ကနေရွေးချယ်ဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောအရပ်တို့ကိုအတူ, တစ်ခရီးသွားနှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုပ်ဘို့ကခက်ခဲနိုင်ပါတယ် ခရီးလမ်းဆုံး. သင်ပထမဦးဆုံးကြည့်ရှုရန်ဥရောပ၌ဖြစ်သောယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်က်ဘ်ဆိုက်များကိုရှေးခယျြကူညီရန်, ကျနော်တို့စာရင်းတစ်ခုပြုစုကြပါပြီ:
အီတလီနိုင်ငံယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဆိုဒ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကလူသိအများဆုံးသူမြားအချို့ကိုဖော်ပြပါမယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးမှတ်တိုင်ကတော့ ပေါင်ပေ၏ရှေးဟောင်းသုတေသနဒေသများ, Herculaneum, နှင့် Torre Annunziata. သူတို့ရဲ့အရေးပါမှုကိုသူတို့ Mt ၏မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုအတွက်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံကြသည်ဟုမြို့ရွာများ၏ရှေးဟောင်းရုပ်ကြွင်းများမှာဆိုတဲ့အချက်ကိုတည်ရှိသည်. အတွက် Vesuvius 79 အေဒီ. Castel del Monte လည်းရှိပါသည်, 13 ရာစုကနေရဲတိုက်ချိန်းတွေ့. ဒါကြောင့်ဥရောပများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပေါင်းဘော်ရောနှောပြီးကတည်းကEan Cistercian Gothic အဘိဓါန်နှင့်မွတ်စလင် ဗိသုကာအတတ်ပညာ, ကစိတ်ဝင်စားဖွယ်မျက်မှောက်ဖြစ်ပါသည်.
ဂျာမဏီရဲတိုက်တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်, ဘုရားရှိခိုးကြောငျး, နှင့်အခြားအံ့သြဖွယ်ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်က်ဘ်ဆိုက်များ. Aachen ဘုရားရှိခိုးကျောင်း Charlemagne များ၏သင်္ချိုင်းရာအရပျမြားနှငျ့ရှေးကတည်းကပထမဦးဆုံး-built အောက်တိုက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာဖြစ်ပါသည်. အတွင်းလူကြိုက်အများဆုံးမှတ်တိုင် ဂျာမနီ အခြားဘုရားကျောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်, ဤ Cologne အတွက်တဦးတည်း. ဒါဟာကနေစတင်တည်ဆောက်မှရာစုနှစ်များစွာ ယူ. , 1248. ထို့အပွငျ, ရောမအင်ပါယာ၏နယ်စပ်ဒေသများသို့လည်းအလည်အပတ်ခရီးရောက်ရှိခဲ့သည်. လူတိုင်း Hadrian က Wall နှင့် Antonine အမှတ်တရကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်, built-in ခဲ့ပြီးသော 122 အေဒီနှင့် 142 အေဒီ, လိုအပ်သလို.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ:https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Funesco-world-heritage-sites-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)